Enye yeenzuzo zokulahla iarhente kubanini bevenkile ezihlayo kukuhlola ngaphandle kwempahla.
Ukuhlolwa kwemveliso yindlela yokuqinisekisa ukuba iimveliso ziyahlangabezana nemigangatho kunye neemfuno. Inkqubo yokuhlolwa kwemveliso ichaphazela ikakhulu ukujonga ukubonakala kwemveliso, ulwakhiwo kunye nokusebenza kwayo, kwaye ihlala iqhutywa kumzi-mveliso apho imveliso yakho yenziwa khona.
Ngaphambi kokuthumela uluhlu lwezinto ezininzi kwiindawo zethu zokugcina iimpahla, iqela lethu lokuthengisa eFulfill Panda liqinisekisa ukuba umzi mveliso osibonayo usithumela imifanekiso yemveliso.
Inkqubo yovavanyo lwempahla iqala nje ukuba uluhlu lwempahla oluninzi olungenisiweyo lu-odolwe ukusukela ekufikeni kwempahla.
KWENZEKA NTONI KUHLOLO LWENDALO?
Unobhala wempahla ujonga kwi-inventri ethunyelwe ngumnikezeli ngeenkonzo ngale nkqubo. Uhlola ipakethe kwaye avule nganye ngexesha ukuqinisekisa ukuba inani lezinto kwibhokisi nganye lihambelana nomyalelo wokuthenga.
Naye iimvavanyo ukubona ukuba iifoto zemveliso ziyahambelana nezinto ezingenisiwe.
Ngaba ubunzima buhambelana nokucaciswa kwemveliso? Ukuba ubunzima bemveliso bohlukile kwiimfuno zemveliso ezibonelelwe ngumnikezeli, inkqubo iyalungiswa.
Ngaba ikhona into engekhoyo? Nakuphi na ukwahluka, nokuba kukunqongophala okanye ngaphezulu kokungeniswa koluhlu lweempahla ezingenayo kuxeliwe kumthengisi ukuba athobele.
Ngaba bukhona ubungqina bengxaki? Oku kusebenza ngokukodwa kwizinto ezingaqhelekanga ezifana nokusebenza kwebhetri okanye izinto zombane. Ukuhlolwa okungahleliwe kwenzelwa ukukhangela ukuba ngaba zisebenza kakuhle njengoko bekucwangcisiwe.
Injani imeko yokupakisha kwangaphandle?
Kude kube yimveliso yokupakisha kunye nokuhlanganisa, yonke le misebenzi igqityiwe ngexesha lokuhlolwa kwempahla.
Senza konke okusemandleni ethu ukubonelela ngeyona mpahla intle kwinkampani yakho ye-E-commerce ekhulayo kuba ishishini lakho lishishini lethu.
Soze sibaphoxe abathengi bakho. Ngapha koko, siluthatha nzulu uxanduva ngaphezulu kwee-odolo ezivela kumaqabane.